Kedu ajụjụ ndị a na-ajụkarị maka engines ọchụchọ?
Ajụjụ engine ma ọ bụ ajụjụ gbara ajụjụ bụ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ndị ọkachamara metụtara ọrụ n'ime igbe ọchụchọ iji nweta ihe kachasị mkpa na nchọta ọchụchọ ha.Ajuju ajuju nwere ike kewa n'ime ato ato - igodo, ozi na ahia. Ajụjụ a dịgasị iche iche na-enyere anyị aka ịghọta ndị ahịa anyị nwere ike ịchọpụta àgwà na nzube ha. Ka anyị lebakwuo ụdị ajụjụ ajụjụ search engine anya.
Ụdị ajụjụ engine nke atọ
Ajụjụ ntinye ụdị ụdị ajụjụ ahụ mgbe onye ọrụ maara ụdị isi ọ ga - achọ ịchọta. Naanị ihe ọ na-etinye na URL weebụsaịtị ya bụ na igbe nchọta ma nweta ihe dị mkpa. Ihe nyocha nke ziri ezi nwere ezi ebumnuche na ọ bụrụ na saịtị gị abụghị nke ahụ n'uche onye ọrụ, saịtị gị agaghị ama.
O nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya iji wuo usoro a. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya iji meziwanye njirimara gị, ị ga-etinye ohere gị abụọ. Ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ nke na-apụta na peeji nke Google SERP mbụ ma ọ bụrụ na ịbịakwute ajụjụ nyocha bụ asaa. Google ewerewo nzọụkwụ a dịka o yiri ihe na-abaghị uru igosipụta ihe karịrị asaa ma ọ bụrụ na ndị ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ na-enweta ala na TOP. Otú ọ dị, ụfọdụ ajụjụ ndị dị ka igodo igodo nwere ike ọ gaghị abụ ụdị a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị ndị ọrụ niile na - achọ ajụjụ "Instagram" kwesịrị ịchọpụta ngwa ngwa a. Ụfọdụ n'ime ha ga-achọ ịgụ ụfọdụ isiokwu ma ọ bụ ozi metụtara ya gbasara ụfọdụ ntọala Instagram ma ọ bụ mmelite. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jide n'aka na ị nwere ajụjụ ntinye nyocha dị mkpa nke gosipụtara na nkwụghachi ụgwọ na organic.
Ajuju ọmụma bụ mgbe onye ọrụ chọrọ ịchọta azịza nke ajụjụ ya ma ọ bụ dozie nsogbu. Ọ dịghị mkpa maka ya ụdị saịtị ọ ga-eche ihu. Enwere naanị ihe achọrọ na isi iyi weebụ a ga-aba uru na ajụjụ ya. Ihe nchoputa nke ihe omuma bu ngbasa karia nke ndi ndi ozo jiri. Nzube bụ isi nke njikarịcha search engine bụ iji nweta ndị ọrụ na-achọ ụfọdụ ọdịnaya ọdịnaya site na enyemaka nke ajụjụ ajụjụ. Ọ bụrụ na i nwere ọdịnaya SEO ma na-ekere òkè nke nwere ike inyere ndị ọrụ aka idozi nsogbu ha, mgbe ahụ, ọ ga-abụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enweta ọtụtụ ụzọ okporo ụzọ nke nwere ike ịbanye n'ime ahịa. O siri ike inweta ụfọdụ uru site na ajụjụ gbara ajụjụ dịka ọnọdụ SERP mbụ, n'ọnọdụ a, na-enwetakarị azịza Google Knowledge Graph na Wikipedia isiokwu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ ga-achọ ịmatakwu ihe ọmụma gbasara isiokwu ahụ. Ọ bụ ohere gị iji bulie ọnụọgụ abụọ na ntụgharị gị. Iji kpoo okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị, ịnwere ike iji posts blog na ozi ọma na ndụmọdụ. Ọzọkwa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ide ederede ntinye site na ntinye na ntinye vidiyo.
Ajụjụ njụ ahịa bụ mgbe onye ọrụ ga-achọ ịzụta. Ọ dị ka "ịzụta ihe" ma ọ bụ "ịhazi ihe. "Ọzọkwa, ajụjụ azụmahịa nwere ike ịgụnye kpọmkwem aha aha" Apple ngwaọrụ "ma ọ bụ" Samsung smartphones. "Ọtụtụ nnyocha obodo dịka" ụlọ oriri na ọṅụṅụ Eshia kasị nso na Chicago "bụ azụmahịa. Ajuju azụmahịa bụ uru kacha mma inweta ajụjụ nke na-enye ndị ahịa aka n'ịntanetị ego. Iji nweta ROI kachasị elu, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-ezo aka njikarịcha search engine na mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-kwa-click Source .